विवाहपछि महिलाको पेट नघटनुका करणहरू ? | सुदुरपश्चिम खबर
पेट बढ्ने समस्या धेरैलाई भएको पाइन्छ । विशेषगरी विवाहित महिलाहरुमा यो समस्या अत्यधिक पाइन्छ । जिम जाँदा पनि कतिपयको पेट घटाउन मुश्किल पर्छ । विशेषगरी, ४० वर्ष कटेका महिलाहरुलाई त झनै पेटमा लागेको बोसो घटाउने काम निकै गाह्रो हुन्छ । किन हुन्छ पेट घटाउन मुश्किल ?
यो पनि पढ्नुहोस् : तपाईंले आफ्नो फेसबुक अकाउन्ट सुरक्षित राख्न जान्नैपर्ने १० कुराःअहिलेको समयमा फेसबुक अकाउण्ट नभएको मानिस कमै हुन्छन् । फेसबुक तपाईंका लागि सहज मात्रै नभएर खतराको विषय पनि बन्न सक्छ, त्यसैले यसलाई सुरक्षित रुपमा प्रयोग गर्ने तर्फ हरेक प्रयोगकर्ताले ध्यान दिन जरुरी छ । आज हामी तपाईंहरुलाई फेसबुक कसरी सुरक्षित रुपमा प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ ।